Beesha Habar Cafaan - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Habar Cafaan)
Beesha Habar Cafaan (Af Ingiriis : Ha'bar Afan; Af carabi: هبر عفان sidoo kale lagu naaneyso (HC) waa mid ka mid ah sadexda rukun ee beel-weynta Gadabuursi ee dega gobolka Awdal, Salal, Gabiley Jamhuuriyada Somaliland; deegaano ka mid ah kilinka 5aad ee dalka Itoobiya, iyo meelo badan oo ah wadanka Jabuuti.
Beesha Habar Cafaan waxay ka kooban tahay labo iyo toban qabiil ama reerood. Kuwaasi oo u sii kala baxa beelo iyo jufooyin badan.
2 Deegaanada Beesha
4 Reeraha Beesha Gadabuursi
Beesha Habarcafaan waxay ka tirsan tahay Beelweynta Gadabuursi, Dir, Soomaal. Sidaasi ay tahay waxaa Habarcafaan ka kooban tahay labo-iyo-toban reerood kuwaasi oo kala ah:
Muse Aaden Xasan
Beesha Habar Cafaan waxay dhul balaadhan ku leedahay sadex wadan oo kala ah Somaliland, Itoobiya iyo Jabuuti.
Dalka Somaliland waxay ka degtaa beeshu meelo aad u badan, ugu yaraan magaalo kasta oo ku taala dalka, gaar ahaan: Magaalada Borama, Jirjir, Xaliimad, Baki, Xariirad, Cabdulqaadir, Goronyo Cowl, Xego, Weeraar, Abuqeys iyo agagaarkeeda.
Dhinaca kale, dalka Itoobiya beeshu waxay ka degtaa deegaano badan oo miyi iyo magaaloba leh, kuwaasi waxaa ka mid ah: Magaalada Lafo-Ciise, Dhoodaan, magaalada Jigjiga, iyo deegaano badan oo baadiye ah.
Ugu dambeyn beesha Habar Cafaan waxay degaano ku leedahay dalka Jabuuti, gaar ahaan magaalada caasimada u ah wadankaasi ee Magaalo-madax Jabuuti.
Guud ahaan, Beesha Habar Cafaan waa tiir ka mid ah sadexda tiir ee Beesha. Waa waaxda labaad ee ugu wayn Beesha. Sidoo kale waa mida kowaad ee ugu dhaqaalaha badan Beesha Samaroon.
Gadabuursi, Samaroon (ingiriis: Gadaboursi, "Gadabuursi"; carabi: ﻏﺎﺩﺍﺑﻮﻭﺭﺳﻲ, "Gadabuursiy") waa beel ka mid ah beelaha daga ismaamul-goboleedka Somaliland. Beesha Gadabuursi waxay si rasmi ah u dagaan ooy aad ugu badan yihiin isla markaana iska leeyihiin gobolka Awdal ee magaalo-madaxda u tahay caasimada Borama ee dhacda waqooyiga dhulka Soomaalidu degto. Intaasi waxaa dheer, beeshu waxay deegaan rasmi ah ku leedahay gobolo ka mid ah wadanka Itoobiya iyo Jabuuti.
Reeraha Beesha Gadabuursi
2. Beesha Makaahiil: beesha Makaahiil waa waax ka mid ah sadexda rukun ee Samaroonka, waxayna guud ahaan u kala baxaan Afar Qabiil oo mid bilaa tafiir yahay ama reerood.
↑ "Gadabuursi ee dega gobolka Awdal"
↑ "Beesha Habar Cafaan waxay ka kooban tahay labo iyo toban qabiil"
↑ "Beesha Xeebjire waa tan hogaamisa isla markaana ugu badan 12ka dhadhaar ee Habar Cafaan"
↑ "Beelaha isku xidhan ee Subeer: Dhagaweyne, Makayl, Reer Xaamud"
↑ "Somaliland, Itoobiya iyo Jabuuti"
↑ "Borama, Jirjir, Xaliimad, Baki, Xariirad, Cabdulqaadir"
↑ "Magaalada Lafo-Ciise, Dhoodaan, magaalada Jigjiga"
↑ "waa mida kowaad ee ugu dhaqaalaha badan Beesha Samaroon"
↑ "Beesha Gadabuursi"
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Beesha_Habar_Cafaan&oldid=200411"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 27 Abriil 2020, marka ee eheed 20:02.